Machine Thermoforming, milina fanaovana kaopy plastika - GTMSMART
GTMSMART Machinery Co., Ltd.dia orinasa teknolojia avo lenta mampiditra R&D, famokarana, varotra ary serivisy. Ny vokatra fototra dia ahitanaMachine Thermoforming mandeha ho azy SY Kaopy plastika Thermoforming Machine, Plastika Vacuum mamorona milina, milina kaopy taratasy, milina lovia taratasy, milina takelaka taratasy SnsManatanteraka tanteraka ny rafitra fitantanana ISO9001 izahay ary manara-maso tsara ny fizotran'ny famokarana manontolo. Ny mpiasa rehetra dia tsy maintsy mandalo fiofanana matihanina alohan'ny hiasa. Ny fizotran'ny fanodinana sy ny fivoriambe rehetra dia manana fenitra ara-teknika siantifika henjana. Ny ekipa mpanamboatra tena tsara sy ny rafitra kalitao feno dia miantoka ny fahamarinan'ny fanodinana sy ny fivoriambe, ary koa ny fahamarinan-toerana sy ny fahatokisana ny famokarana.
Plastika vacuum Mamorona Machine: Indrindra ho an'ny famokarana plastika isan-karazany fitoeran-javatra (atody lovia, voankazo fitoeran-javatra, fonosana fitoeran-javatra, sns) miaraka amin'ny thermoplastic takelaka, toy ny APET, PETG, PS, PSPS, PP, PVC, sns.
Ity milina thermoforming ity dia ampiasaina amin'ny famokarana sakafo maivana / haingana, kaopy plastika voankazo, boaty, takelaka, fitoeran-javatra ary fanafody, PP, PS, PET, PVC, sns.
Kaopy plastika Thermoforming Machine
Cup Thermoforming Machine Indrindra indrindra amin'ny famokarana tavoahangy plastika isan-karazany (kaopy jelly, kaopy fisotroana, fitoeran-javatra fonosana, sns) miaraka amin'ny takelaka thermoplastic, toy ny PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, sns.
Modely mifandraika amin'ny " GTM503B